Satechi USB-C Clamp HUB Pro Ongorora yeMac | Ndinobva mac
Satechi USB-C Clamp HUB Pro Ongorora yeMac
IMac chidimbu chekugadzira pamwe nekombuta yemhando yepamusoro, hazvisi netsaona kuti chave chimwe chezvinhu zvinoyevedza zveApple, kumberi kwayo kwakachena netambo, zviteshi kana mabhatani. Asi izvo zvine mutengo, uye ndizvo kubatanidza chimwe chinhu kune chiteshi chayo chemberi dzimwe nguva kugona kufamba.
Isu takaedza imwe yemhinduro idzo Satechi inotipa neayo USB-C Clamp HUB Pro, hub iyo Yakabatanidzwa kune imwechete USB-C chiteshi pane iMac yako, inopa inosvika matanhatu epamberi yekubatanidza chiteshi, uye zvinodaro zvichitora zvakanyanya kutarisira dhizaini yeMac yako.
1 Magadzirirwo uye dhizaini
2 Yakachena uye yakapusa kugadzirisa system
Magadzirirwo uye dhizaini
Iyi Satechi HUB yakanyatsogadzirirwa kushandiswa neMac, kunyanya nemhando nyowani dza2017 dzinosanganisira zviteshi zveThunderbolt 3 (USB-C) kumashure kwekomputa. Yakagadzirwa nealuminium, saka inoita senge chimwe chinhu cheMac yedu, uye tinayo inowanikwa mune iwo maviri mavara ayo atinogona kutenga iMac yedu: grey grey nesirivheri.. Kunzwa kana uchitora iyo Satechi HUB kwakasiyana zvakanyanya neiyo yemamwe michina yakafanana yandakakwanisa kuyedza, yakati chekei asi pachinzvimbo yakagadzirwa nemapurasitiki. Inotaridzika yakasimba yakasimba uye inokwana zvakanaka pane yedu iMac.
Inayo maviri makadhi slots (SD uye microSD), matatu USB 3.0 madoko, uye imwe USB-C chiteshi Izvo hazvitsigire Power Dhirivhari, saka hazvishande kubhadharisa yako iPad, yako MacBook kana kukurumidza-kuchaja yako iPhone. Iwo maratidziro emachiteshi epamberi haasi iwo anomhanyisa ayo tekinoroji inobvumidza, asi kune izvo isu tine zviteshi zvemberi zveMac, uye isu tinogona kusiya epamberi kune dzimwe nguva kubatana uko kusingade kumhanyisa kweThunderbolt 3 futi.
Yakachena uye yakapusa kugadzirisa system
Chinhu chakakosha patinoshandisa chishongedzo cherudzi urwu ndechekuti Iwe unofanirwa kutarisira pamusoro penzvimbo yealuminium yeMac yedu, pasina kusiya chero rudzi rwechiratidzo, kana zvakanyanya, kuchikwenya. Kusungirirwa kunoitwa kuburikidza nemhepo inovhenekera pamucheto wezasi wepasi peMac, ine tabo dzinodzorwa kuburikidza nevhiri rinotenderera riri kumashure kweHUB. Kuisa kana kubvisa kunotora mineti. Isu tine margin kana zvasvika pakukwanisa kuiisa zvakanyanya kuruboshwe kana kurudyi, asi zvishoma, sezvo tambo yekubatanidza ipfupi, saka inofanira kugara ichienda kurudyi (sekutitarisa kwatinako) kwekomputa yedu.
Iko kugadzikana kwakadzikama, mudziyo haufambe kana kudonha, asi kuisa chero USB ndangariro isu tichafanirwa kushandisa ese mawoko, sezvo skrini yeMac yedu ichifamba, saka kuzviita neruoko rumwe chinhu chingangoita zvisingaite. Kubatana kwacho kwakagadzikana, zvishandiso zvakagadziriswa zvakakwana uye hapana maratidziro ekupindira nekufambisa faira. Chidiki che LED padyo padyo neUSB-C chinoratidza kuti HUB yakabatana neMac yako.
Kana iwe wakambozvibvunza kuti nei yako iMac's SD kana USB kadhi slots ari kumashure chete, saka unoda iyi HUB kubva kuSatechi. Nezvinhu zvakanaka uye dhizaini inoenderana zvakakwana neMac yako, ichi chidiki chinokupa iwe matanhatu epamberi madoko uchishandisa imwechete USB-C pakombuta yako. Iyo zvakare ine inonakidza kwazvo mutengo, inowanikwa paAmazon ye € 49,99 (link).
Dhizaini dhizaini uye zvigadzirwa
Matangi matanhatu epamberi
USB-C hapana Simba Dhirivhari
Hapana odhiyo jack
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Satechi USB-C Clamp HUB Pro Ongorora yeMac
Kwenguva yekutanga Apple kutepfenyura chiitiko ichi munaGunyana 10 paYouTube
Zvinoenderana negwaro rakaburitswa kubva kuApple tichava nemudziyo mutsva naSiri wekudonha kwa2021